Ciyaaraha koobka Aduunka(2018) oo live ah
Man City Oo Taako Loo Dhigay
Jigjiga(cakaaranews) Sabti 12ka march 2016 Kooxda man city oo lumisay fursad dahabi ahayd oo ay kusoo yarayn kartay farqiga dhibcaha ee kala dhaxeeye kooxaha hogaamiyaasha horyaalka ee liecester city sidoo kalana ay ku heli kartay inay gasho kaalinta sadaxaad ee horyaalka kadib markay ay barbaro goolal la’aan ah lagashay kooxda Norwich city.
Hadaba kooxda man city ayaa ah mid kasii daysay kooxaha hore horyaalka ah ee mid walba isku wado inay hanato koobaka kuwasoo kala ah Leicester city,tottenham iyo arsenal hadii ayna waxba iskabadiln natiijooyinka sagaalka kulan ee uhadhay afarta kooxood ee ugu saraysa haatan.
Halkuu Marayaa Tartanka Horyaalka Premier Leaguegu?
Jigjiga (CN) Sabti 05 Dec, 2015 Waxaad Halka Ka Ogaataan Natiijadii iyo Kulamadii ugu Dambeeyay La Ciyaaray Sabti 05 Dec 2015 iyo Shaxda Ciyaaraha Horyaalka Ingriiska oo Dhamaystiran.
Man United Oo Garaacday Arsenal
Jijiga ( cakaaranews ) axad, Feb 28, 2016, waxay garoonka ciyaaraha ee man united ee Old traford ay ciyaar aad u xiisabadan ku dhexmartey labada kooxood ee man united iyo Arsenal.
ciyaartan oo ahayd mid ku bilaabatay si caadi ah ayay kooxda man united weerar ku qaaday kooxda arsenal iyagoo daqiiqadii 29aad layimid goshii 1aad uuna dhaliyay weeraryahanka kooxda man united Rashford. isagoo hadana isla daqiiqadii 33aad goshii 2aad dhaliyay.
hadaba kooxda arsenal ayaa layimid isbadal ciyareed iyagoo daqiiqadii 40aad layimid goshii 1aad oo uu dhaliyay ciyaaryahanka kooxda arsenal ee Welback halkaas oo galinkii hore ciyaarta lagu kala baxay 2-1.
sikastaba ha ahaatee ciyaartan ayaa ahayd mid kooxda man united ay galinka danbe lasoo galeen ciyaar wanaag tasoo u suura galisay inay daqiiqadii 65 la yimaadaan goshii 3aad. halka kooxda arsenal ay daqiiqadii 69aad la yimaadeen goshii 2aad uuna dhaliyay ciyaaryahanka kooxda arsenal ee Ozil. ciyaartiina ku dhamatey 3-2 guushiina ku raacday kooxda Man United
kooxda man untd iyo man city
kooxda Man untd iyo man city oo barbaro gool la aan ah ku kala baxay
labadan kooxod ayay ciyaar aad u xiisabadan ku dhexmartay goroonka man untd ee Old-trafford inkastoy man untd iskudayday fursado badan, laakiin ay usuura galiwayday inay latimaado wax gool ah taasoo man city u suura galisay inay sii hayso hogaanka horyaalka. inkastoy arsenal wada leeyihiin min 22 dhibcood halkay man united ku jirto kaalinta afraad
Arsenal vs Manchester United 3 - 0 2015
Wararkii oogu mihiimsanaa ciyaara kubada cagta
Suuqa kala iibsashada ciyaartoyga ee aduunka
khibrad kubaded oo layaab ah